Maamulka Baxdo oo hergiliyey Saldhig ciidan iyo xaruntii dagmadaasi | goboladaradio.com	Friday, May 24th, 2013	Home
Maamulka Baxdo oo hergiliyey Saldhig ciidan iyo xaruntii dagmadaasi
Published on July 29, 2012 by admin · 7 Comments Published on July 29, 2012 by Lucky (Gobolada Radio):-Maamulka cusub ee dagmada Baxdo ee gobolka Ximan ayaa waxa uu wadaa hawlo lagu hormarinayo maamulka dagmadaasi, iyadoo dhisme lagu bilaabay xaruntii uu ku shaqayn lahaa maamulka dagmada iyo dhisme Saldhig Boolis.
Agaasimaha guud ee wasaarada arrimaha gudaha maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb C/llahi Macalin Cabdi Geedi oo dhawaan socdaal shaqo ku tagay dagmaadasi aya ka warbixiyay hawlaha hormarineed ee hadda ka socda dagmadaasi, isagoo sheegay in maamulka cusub ee dagmadaasi uu ku talaabsanayo hormar dhinaca arrimaha bulshada ah.
Waxaa hadda la dhisayaa xaruntii dagmada Baxdo iyo Saldhig Boolis maadaama maamulkii hore ee dagmada uu ku shaqayn jiray guryo kiro ah, waxaana dhismayaashan hawlohooda ka qayb qaadanaya qaybaha bulshada oo maamulka dagmadaasi uu horkacayo.
Gudoomiyaha cusub ee maamulka dagmada Baxdo Bashiir Maxamed Cali ayaa goor sii horaysay sheegay in maamulkiisu uu hawlo badan qabanayo, waxaana uu bulshada dal iyo dibadba ka codsaday in hawlaha ay qabanayaan lagu taageero gaar ahaan dhanka caafimaadka oo dagmadaasi baahi wayn xilligan u qabto.
cabdale says:	Jul 30, 2012 at 3:03 PM	masha alah waa arin wanaagsan waana soo dha weeneynaa gudoomiye bashiir waxaan leenahay allha kulagarab galo iyo dhamaan shacabka reer ximan xeeb midakale web goblada waxaan kacod snaynaa masiwirda baxdo hadaad awoodan wa mahada santahiin bahda webka
Reply »	Meo says:	Sep 22, 2012 at 1:23 AM	Aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay dagnoyiokuaca, Ilaahayna hanaga wada aqbalo. Hadduu Eebbe idmo, T-Bone Steak’ waan soo gelin doonnaa. Waxaan badi sameysannaa waqtiga Summer-ka (kulaylaha) waxaanna ka dhignaa solay. Isaga oo caadi la u-dabayna waan sameynaa.
Reply »	(mataan) (tahliil) (cismaan) says:	Aug 1, 2012 at 8:38 AM	Asc walaalahayga somalileed meel kasta oo ay joogaa dhamaantiin waa idin salamay. Waxaana sigaar ah u salaamaya shaqaalaha idaacada. Codka gobolada dhexe oo sal dhigeedu yahay. Casimada maamul gobaleedka ximan iyo xeeb. Waxaan kaloo sigaar ah u salaamayaa. U mada ree ximan iyo xeeb oo dhan marka hada waxaan. Leeyahay shaqaalaha idaacada. In ay noosoo gudbiyaan sawirada dhabta ah ayagoo ku mahad san kuwa ay hada noo soo direen oo dhabta ah. Marka hada waa sawiro lagu farxi karo ee hanoo soo bad sheen walaalahayga qaaliga. Ahaw. Waana idin salaamay dhamaantiin mEel kasta. Oo aad joogtaan hada
Reply »	WEHELIYE says:	Aug 9, 2012 at 6:41 AM	ASC WALAAL WAA HORUMAR MAXAA YEELAY HORUMAR LAMA HELO ILAA NABADGELYO LAHELO CIIDANKUNA WAA FURAHA AMMAANKA EE WALAALAYAAL ISKA QABTA CIDDII LUGOYNAYSA AMMAANKIINNA KUNA DADAALA ISKU DUUBNI
MAAMULKANA AAD AYAAN UGU MAHADCELINAYAA
Reply »	WEHELIYE says:	Aug 9, 2012 at 6:43 AM	ASC WAAD MAHADSANTIHIIN GUUL IYO HORUMAR AYAAN IDIIN RAJEYNAYAA
Reply »	farxaan cismaan geesood says:	Oct 10, 2012 at 1:45 PM	asc waa horumar latabokaro oo ugaray maamulkena wanaagsan waxana ku borinaya meel walbo oo ey jogaan umada udhalatay ximin iyo xeeb iney ka qeyb qaatan dib udhiska dhulkoda hooyo
Reply »	c.naasir c.dulaah xuseen xasan says:	Oct 10, 2012 at 11:02 PM	Asc asxbta runtii wa farxad iyo kalsoni ay mujinayaan dhamaan mamulka iyo inta lashaqaysa aniga aad ayaan u jeclaan lahaa in aan dhamaan dhulkii aan tago o aan so arko hadana manta in baxdo saldhig laga sameyo o ay dadku mel ay u dacwodaan ayleyihiin waa farxad wayn ilahay ayana oga mahadd celinaynaa
DAAWO VIDEO: Shuruuda laga doonaayo maalmaha ciida	Godinlabe oo laga dareemayo Mashquul farabadan oo ku aadan Munaasabada Ciida
(Oct 26, 2012 Goboladaradio) Fagaaraha Weyn ee ku yaala Afaafka hore ee Xarunta Madaxtooyada Maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb ...	website analytics